﻿	Esi Esi Osikapa - Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
ị nwere ike iji ofe ọkụkọ kama ofe anụ ehi
ọ bụghị ime kuki na-enweghị ahụekere butter Ntụziaka
-esi mee ka a arụrụ n'ụlọ milkshake enweghị a blender
ihe iri na achicha nduku
pb osikapa krispie emeso na chocolate
Esi Esi Osikapa
Esi Esi Osikapa - howmụta esi esi nri otu osikapa zuru oke nke osikapa esighi ike! Osikapa bụ m nwaanyị 14 afọ ọkacha mmasị nri na anyị na-eje ozi ya mgbe n'akụkụ anyị nri abalị (na-eme ka mmezi maka osikapa pudding ma ọ bụ e ghere eghe )!
Ngwunye a dị mfe bụ akụkụ zuru oke iji bulie ya elu Mongolian Amịrị ma ọ bụ nke kachasị amasị anyị Ọkụkọ Bourbon na ite ite !
Ntụziaka na noodles na ude nke ero ofe
Etu esi esi nri osikapa zuru oke
Zuru oke osikapa n’elu stovu dị mfe! M hụrụ n'anya osikapa dị ka akụkụ nri, na a bido ighe ma ọ bụ ọbụna dị ka eji megharịa ọnụ na anyị osikapa pudding ọkacha mmasị ! Ọ bụ ezie na osikapa dị ka a ga - asị na ọ ga - adị mfe ịme, mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịpụ apụ ma ọ bụ gooey ma ọ bụrụ na esighi ya nri (ma ọ bụ sie ike ma ọ bụrụ na anaghị sie ya).
Ozugbo ị matara ọnụ ọgụgụ ziri ezi na oge gbakwunyere obere ndụmọdụ ole na ole (dị ka enweghị ntanye mgbe ọ na-esi nri) ị ga-enweta efere osikapa zuru oke oge ọ bụla!
Osikapa na Mmiri Mmiri
Nri ziri ezi na mmiri ruru 1: 2. Ga-achọ otu iko osikapa na iko iko 2 (ma ọ bụ akụkụ ọ bụla).
Ego ole ka osikapa dị na paụnd? E nwere iko iko osikapa abụọ na paụnd na iko ọ bụla nke osikapa akọrọ ga-enye iko iko osikapa 3 (otu paụnd osikapa kpọrọ nkụ ga-ewepụta iko 6 nke osikapa esiri esi).
ọdịiche dị n'etiti marinara na tomato ihendori
Osikapa bụ n'ozuzu ezigbo mfe esi nri ma ọ nwere ike mgbe ụfọdụ ejedebe nke nnyapade nke (ma ọ bụrụ na ị na-eme sushi) ị na-achọghị! Ọ dị mkpa ijide n'aka na ị na-esi nri maka oge kwesịrị ekwesị ka ọ ghara ịdị n'okpuru ma ọ bụ karịa esi ya!
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji jide n'aka na ị ga-enweta osikapa na-agbanwe agbanwe oge ọ bụla!
Sachaa: Nye osikapa gị ngwa ngwa iji wepụ ihe mgbakwunye, nke a ga - enyere aka mee ka ọ ghara ịrapara.
Oke: Jiri nha 1 iko osikapa mee iko 2 mmiri.
Adịghị akpali: Mgbe izizi ị gbakwunye osikapa, nye ya otu ọsọ ma ọ bụ abụọ ngwa ngwa wee zere ịkwalite ya. Ricekpali osikapa nwere ike ịhapụ starches ma mee ya nnyapade.
Ọ dịghị Peeking: Ozugbo agbakwunyere osikapa na mmiri ịgbọ agbọ, gbanye okpomọkụ ahụ na obere simmer ma ghara ibuli ihe mkpuchi ahụ.
Hapụ: Ozugbo oge gachara, wepu ya n’ọkụ wee hapụ ịnọdụ ala nkeji 5 (enweghị peeking). Ozugbo ọ zuru ike 5 nkeji, efu na ndụdụ tupu ị na-eje ozi.
creamy chicken pasta salad Ezi ntụziaka mfe
Nwere osikapa osikapa?
Akwado osikapa esi nri ga-eme ka ọ dị ngwa ngwa ma enwere ike ịzaghachi ya ruo ụbọchị atọ.
You nwere ike ifrii osikapa esi nri? Ee, osikapa fọdụrụnụ nwere ike ịjụ oyi ruo ọnwa isii na-eme ka akụkụ dị mfe ma dị mfe n’ime nkeji ole na ole. O zuru oke maka ịgbakwunye na ofe na stews, casseroles ma ọ bụ ọbụna iji kpoo ọkụ dị ka nri n'akụkụ!
onwu mule nwere mint
Etu esi esi ekpori osikapa
Osikapa nwere ike reheated na stovu ma ọ bụ ngwa ndakwa nri. Tinye ngaji mmiri ma ọ bụ broth maka iko osikapa ọ bụla na mkpuchi. Isi ihe dị ka nkeji 5 na ọkụ ma ọ bụ 1-2 nkeji na oven microwave. Nwere ike ịchọ ntakịrị oge maka osikapa oyi.
Ntụziaka iji jee ozi karịrị osikapa
Meatballs Uri di utoo na
Ebido Fri Veggies - Mfe!
Azụ ọkụkọ - Ezinụlọ ọkacha mmasị!
15 Bean Slow Cooker Chili - Zuru okè maka ụbọchị egwuregwu!
Mfe Steak Switzerland - Nkasi obi nri!
Oge Nkwadebeabụọ Nkeji Oge nri18 Nkeji Oge Ezumike5 Nkeji Oge zuru ezuiri abụọ Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Zuru oke esie ya ìhè na N'ụbọchị nke abụọ, osikapa dị mfe iji mee! Bipute Ntụtụ
▢1 iko osikapa
Debe mmiri n'ime ite ma weta obụpde.
Richaa osikapa n'okpuru mmiri oyi (nhọrọ).
Add a nnu nke nnu na osikapa na esi mmiri. Kpuchie ma belata okpomọkụ na ala.
Esi nri nkeji iri na asatọ.
Wepu si ikpo oku ma mee ka anọdụ ala kpuchie maka nkeji 5 ọzọ (enweghị peeking).
Fluff na ndụdụ na-eje ozi.
Brandsfọdụ ụdị osikapa ọcha nwere ike sie ngwa ngwa (nkeji 15-18) mana imirikiti kwesịrị ịchọ ihe dị ka nkeji iri na asatọ.
Isiokwuesi, osikapa N'ezieSide efere Esie yaOnye AsiaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .